DEG DEG+DAAWO: Xubno katirsan Wasiiraddii Cabdi Illey ee Jigjiga oo siro badan kafishay, qaarna diiday tagida Jigjiga? – Puntlandtimes
DEG DEG+DAAWO: Xubno katirsan Wasiiraddii Cabdi Illey ee Jigjiga oo siro badan kafishay, qaarna diiday tagida Jigjiga?
JIGJIGA(P-TIMES)- Qaar kamid ah Wasiiraddii Dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa diiday ka qeybgalka wada hadal loogu yeeray magaalada Addis Ababa ee dalkaas, waxayna sheegeen in aysan aqbalin oo aysan adin halkaas.
In ka badan 30 xubnood oo katirsan Golaha Xisbiga dhexe ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa kusugan magaalada Addis Ababa, markii ay u hogaansameen amar ka soo baxay Xarunta Xisbiga dhexe ee dalka Itoobiya.
Wasiir katirsan wasiiraddii diiday ka qeybgalka kulanka addis Ababa ayaa u sheegay warbaahinta in aysan marnaba aqbali doonin wax kasta oo garab-marsan nidaamka sharciga ah ee u yaala dalkaas…..RIIX HALKAAN SI AAD U DAAWATO.